Rimwe sangano rinoshanda rakazvimirira kuChitungwiza rinoti rabatana nevamwe vaimbi mukutsikisa nziyo dzinokurudzira vechidiki kuti vanyorese kuvhota musarudzo dzichaitwa muna 2023.
Sangano reChitungwiza Community Development Network rinoti rakaona zvakakodzera kuti vechidiki vanyorese kuvhota musarudzo dzemuna 2023 richiti vechidiki ndivo vachiri kutarisira zvakawanda muhupenyu saka vanofanira kusarudza kuti ramangwana ravo richange rakamira sei kuburikidza nekuvhotera hutungamiriri hwavanoda musarudzo idzi.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano iri, VaAdmire Mutize, vanoti vakaona kuti vechidiki vazhinji vanotevera zvikuru mimhanzi yemusambo weZimDancehall vakaona zvakakodzera kuti vashandise musambo uyu kuvakurudzira kuti vanyorese mazita avo kuti vagokwanisa kuvhota musarudzo dziri kuuya.
VaMutize vanoti pari zvino vakatoburitsa dambarefu rine nziyo gumi dziri kukurudzira vechidiki kuti vabude nehuwandu hwavo vanonyoresa sevavhoti.
VaMutize vanotiwo chimwe chakaita kuti vashandise mimhanzi inyaya yekuti vanhu vazhinji havadi kubuda pachena kuti vanoita zvematongerwo enyika saka nokudaro vanoti mimhanzi inosvitsa shoko ravo muchinyararire kuvanhu vakawanda.
Vamwe vaimbi vari muchirongwa ichi vanosanganisira Nomatter Mandaza uyo anozivikanwa mumusambo weZimDancehall nezita rekuti “Lady Sky”.
Lady Sky anoti vaimbi vechisikana vari kusanganawo nematambudziko ekushungurudzwa nevechidiki vanoshandisa zvinodhaka panguva yavanenge vachitsikisa mimhanzi yavo yekukurudzira vechidiki kuti vavhote.
Mumwe muimbi, Jairos Makoni, uyo anoshanda zvakare semutsikisi wemimhanzi anoti denda reCovid 19 riri kuvatadzisa sevaimbi kuimba pajekerere vachikurudzira vechidiki kuti vanyorese kuvhota.
Kunyange hazvo vaimbi ava vari kuitawo pavanogona napo kukurudzira vechidiki kuti vanyorese kuvhota, munyori mupurovhinzi yeHarare muboka revechidiki muMDC Alliance, VaDenford Ngadziore, vanoti Zimbabwe Electoral Commission yakavhara nzvimbo dzakawanda dzinonyoreswa kuvhota.
VaNgadziore vanoti vachatora matanho akakura kwazvo kuti ZEC inyorese vanhu sevavhoti.
Mukuru anoona nezvesarudzo muZEC, VaUtoile Silaigwana, vati tivatumire mibvunzo asi vanga vasati vapindura pataenda pamhepo.
ZEC yakamboburitsa mashoko ichiti iri kushushikana zvikuru kuti vanhu vazhinji havasi kuenda kumahofisi avo kunonyoresa sevavhoti.
MDC Alliance inoti iri kukurudzira veruzhinji kuti vanyorese kuvhota ichiti iri kutarisira vanhu mamiriyoni matanhatu kuti vavhotere bato rayo ukuwo Zanu PF iri kutendererawo nenyika yose ichikurudzira vanhu kunyoresa kuvhota, ichiti iri kutarisirawo kuti ivhoterwe nevanhu mamiriyoni mashanu musarudzo dzemuna 2023.